मत्ती १५ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
१५ तब यरूशलेमबाट फरिसी र शास्त्रीहरू येशूकहाँ आए अनि यसो भने: २ “तपाईंका चेलाहरू किन पुर्खाहरूले बसालेको परम्परा तोड्छन्‌? जस्तो कि, तिनीहरू खाना खानुअघि हात धुँदैनन्‌।” * ३ अनि उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो जवाफ दिनुभयो: “तिमीहरू पनि किन आफ्नो परम्पराको पछि लागेर परमेश्वरको आज्ञा तोड्छौ? ४ उदाहरणका लागि, परमेश्वरले यसो भन्नुभएको छ: ‘तिमीले आफ्नो बुबा र आमाको आदर गर्नू,’ र ‘जसले आफ्नो बुबा वा आमालाई गाली गर्छ, त्यो मारियोस्।’ ५ तर तिमीहरू भन्छौ: ‘जसले आफ्नो बुबा वा आमालाई “तपाईंहरूले मबाट लाभ पाउन सक्ने जे-जति कुराहरू मसित छन्‌, ती मैले परमेश्वरलाई भेटीको रूपमा अर्पण गरिसकें” भन्छ, ६ उसले आफ्नो बुबाको आदर गर्नै पर्दैन।’ यसरी तिमीहरूले आफ्नो परम्पराको खातिर परमेश्वरको वचनलाई बेकामको तुल्याएका छौ। ७ ए कपटीहरू हो, यशैयाले तिमीहरूबारे यसो भनेर ठीकै भविष्यवाणी गरेका थिए: ८ ‘यी मानिसहरू आफ्नो ओठले त मेरो आदर गर्छन्‌, तर तिनीहरूको मन भने मबाट धेरै टाढा छ। ९ तिनीहरू व्यर्थैमा मेरो उपासना गरिरहन्छन्‌, किनकि तिनीहरू मानिसहरूले बनाएका आज्ञाहरूलाई परमेश्वरको शिक्षाजस्तै गरी सिकाउँछन्‌।’ ” १० यति भनिसकेपछि उहाँले भीडलाई नजिक बोलाएर भन्नुभयो: “सुन र यसको अर्थ के हो बुझ: ११ मानिसको मुखबाट जे भित्र पस्छ, त्यसले उसलाई अशुद्ध बनाउँदैन, बरु मुखबाट जे बाहिर निस्कन्छ, त्यसले अशुद्ध बनाउँछ।” १२ तब चेलाहरू आएर उहाँलाई भने: “तपाईंको कुरा सुनेर फरिसीहरू रिसले मुरमुरिएको के तपाईंले चाल पाउनुभयो?” १३ अनि उहाँले जवाफ दिनुभयो: “स्वर्गमा बस्नुहुने मेरो बुबाले नरोपेको हरेक बोट उखेलिनेछ। १४ तिनीहरूलाई त्यस्तै रहनदेओ। किनकि तिनीहरू अन्धा अगुवाहरू हुन्‌। यदि अन्धाले अन्धालाई डोऱ्याउँछ भने, दुवै जना खाल्टोमा खस्नेछन्‌।” १५ त्यतिकैमा पत्रुसले उहाँलाई भने: “अघि तपाईंले भन्नुभएको दृष्टान्तको अर्थ हामीलाई बताइदिनुहोस्।” १६ तिनको कुरा सुनेर उहाँले भन्नुभयो: “के तिमीहरू पनि अझै अबुझ छौ? १७ के तिमीहरूलाई थाह छैन, मुखबाट जे भित्र पस्छ, त्यो पेटमा पुगेपछि बाहिर निस्कन्छ? १८ तर मनमा जे छ, त्यो मुखबाट बाहिर निस्कन्छ र त्यसले मानिसलाई अशुद्ध बनाउँछ। १९ जस्तै: दुष्ट विचार, हत्या, हर किसिमका यौन दुराचार,* चोरी, झूटा साक्षी अनि ईश्वरनिन्दा मनबाटै निस्कन्छ। २० हो, यस्तै कुराहरूले मानिसलाई अशुद्ध बनाउँछ। तर हात नधोई खाँदैमा मानिस अशुद्ध हुने होइन।” २१ त्यसपछि येशू त्यहाँबाट टायर र सीदोनको इलाकातिर लाग्नुभयो। २२ अनि हेर, ती इलाकाबाट आएकी एक फोनिसियाली स्त्रीले ठूलो स्वरले रूँदै भनिन्‌: “हे प्रभु, दाऊदका छोरा, ममाथि कृपा गर्नुहोस्। मेरी छोरीलाई दुष्ट स्वर्गदूतले असाध्यै सताइराखेको छ।” २३ तर उहाँले तिनलाई केही जवाफ दिनुभएन। त्यसैले चेलाहरू उहाँकहाँ आएर यसो भन्दै बिन्ती गर्न थाले: “यस स्त्रीलाई पठाइदिनुहोस्। किनकि यो रूँदै हाम्रो पछि-पछि लागिरहेकी छे।” २४ उहाँले जवाफ दिनुभयो: “म इस्राएलको घरानाका ती मानिसहरूका निम्ति मात्र पठाइएको हुँ, जो हराएका भेडाहरूजस्ता छन्‌।” २५ तब ती स्त्री उहाँको नजिक गइन्‌ र उहाँलाई दण्डवत्‌ गर्दै यसो भनिन्‌: “प्रभु, मलाई मदत गर्नुहोस्!” २६ अनि उहाँले जवाफ दिनुभयो: “केटाकेटीको रोटी खोसेर कुकुरका छाउराहरूलाई दिनु उचित हुँदैन।” २७ तिनले भनिन्‌: “हो प्रभु, तर छाउराहरूले पनि त आफ्ना मालिकको टेबुलबाट झरेका टुक्राटाक्री खान पाउँछन्‌ नि।” २८ तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो: “हे नारी, तिम्रो विश्वास ठूलो रहेछ। तिमीले इच्छा गरेको कुरा तिमीलाई पुगोस्।” तब उत्तिखेरै तिनकी छोरी निको भइन्‌। २९ त्यस इलाका पार गरेर येशू गालील समुद्रको नजिकै पुग्नुभयो र डाँडा उक्लेर उहाँ त्यहाँ बसिरहनुभएको थियो। ३० तब लुला-लङ्गडा, अन्धा, गुँगा र त्यस्तै अरू धेरै मानिस लिएर ठूलो भीड उहाँकहाँ आयो र तिनीहरूलाई उहाँको चरणमा राखिदियो अनि उहाँले तिनीहरू सबैलाई निको पार्नुभयो। ३१ गुँगोले बोल्न थालेको, लङ्गडो हिंड्न थालेको अनि अन्धोले दृष्टि पाएको देखेर भीड छक्क पऱ्यो र तिनीहरूले इस्राएलका परमेश्वरको महिमा गरे। ३२ तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो: “यो भीड देखेर मलाई साह्रै दया लाग्यो, किनभने तिनीहरू मसित बसेको तीन दिन भइसक्यो अनि तिनीहरूसित केही खानेकुरा छैन। म तिनीहरूलाई भोकै पठाउन चाहन्नँ नत्रता तिनीहरू बाटैमा ढल्लान्‌।” ३३ अनि चेलाहरूले उहाँलाई भने: “यत्रो ठूलो भीडलाई खुवाउन यस्तो अनकन्टार ठाउँमा हामीले कहाँबाट रोटी खोजेर ल्याउने?” ३४ तिनीहरूको कुरा सुनेर येशूले भन्नुभयो: “तिमीहरूसित कति वटा रोटी छ?” तिनीहरूले जवाफ दिए: “सात वटा अनि हामीसित केही साना माछाहरू पनि छन्‌।” ३५ अनि भीडलाई चौरमा बस्न अह्राएपछि, ३६ उहाँले सात वटा रोटी र माछा लिनुभयो अनि धन्यवाद चढाएपछि रोटी भाँचेर चेलाहरूलाई दिन थाल्नुभयो र चेलाहरूले भीडलाई बाँडे। ३७ तिनीहरू सबैले खाए र तृप्त भए अनि तिनीहरूले उब्रेको टुक्राटाक्री जम्मा गर्दा सात वटा ठूलो डालो भरियो। ३८ खाने मानिसहरू स्त्री र साना केटाकेटीबाहेक चार हजार थिए। ३९ अन्तमा भीडलाई बिदा गरिसकेपछि उहाँ डुङ्गा चढ्नुभयो र मगादानको इलाकामा पुग्नुभयो।
^ मत्ती १५:२ * यसले फोहर हात धुनुलाई नभई यहूदी परम्पराअनुसार शुद्ध हुने चलनलाई सङ्केत गर्छ।
^ मत्ती १५:१९ * वा, “आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अरूसित राखिने यौनसम्बन्ध र अवैध यौनसम्बन्ध।”